Chester အကြောင်းဆိုထားတဲ့ Linkin Park အဖွဲ့ဝင် Mike Shinoda ရဲ့ “About You”
On April 27, 2018 By fairy
သူမရှိတော့ဘူး… ဒါဟာကျွန်တော့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…. ကျွန်တော် သီချင်းတွေရေးတယ်။ သူ့အကြောင်းတွေပေါ့… တခါတလေ သူ့အကြောင်းမဟုတ်တဲ့သီချင်းတွေရေးတဲ့အခါလဲ သူ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့အကြောင်းမဖြစ်မယ့်သီချင်းတွေရေးတဲ့အခါကျရင်လဲ လူတွေက သူ့အကြောင်းရေးတယ်ပဲထင်ကြတော့မှာ…….
Linkin Park အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mike Shinoda ကသူ့အနေနဲ့ Chester မရှိတော့တဲ့နောက် ခက်ခဲကြေကွဲခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ Chester ဟာ Shinoda နဲ့ ညီအကိုတွေလိုပေါင်းသင်းခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတဖြစ်လဲ band-mate တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
Chester ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာ Shinoda ဟာ တကိုယ်တော် “Post Traumatic” လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ debut album ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး ဒီ album မှာပါမယ့် “About You” ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ Chester အတွက်ရည်စူးပြီးရေးဖွဲ့သီဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Shinoda ဟာဒီသီချင်းအတွက်ရော Chester အတွက်ရော အရမ်းကို မာန်တက်မိပါတယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။
All ofasudden it’s about you….
ဒီသီချင်းရဲ့ rap ပိုင်းကိုတော့ Shinoda ကဆိုထားပြီး featuring အနေနဲ့ Blackbear ကဆိုထားပေးပါတယ်။ “Post Traumatic” မှာပါတဲ့ သီချင်းအများစုကတော့ Chester ကိုရည်စူးထားတဲ့သီချင်းတွေနဲ့ Shinoda ရဲ့ ခံစားမှုတွေအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ ကြယ်လေးတွေလိုပဲ အမြဲတမ်းမြင်မနေရဘူးဆိုရင်တောင် တစ်နေရာမှာတော့ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်းပဲ…. Chester တစ်ယောက် Shinoda ရဲ့ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်တွေကိုမြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးမိပါတယ်…..
Chester ရဲ့ fan တွေအတွက် Linkin Park ကနေလုပ်ထားပေးတဲ့ oInstagramnstagram account ChesterBe ပါ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဝင်ကြည့်ပြီး follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Music Newsboy bandPeople
PREVIOUS POST Previous post: Avicii suicide လုပ်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
NEXT POST Next post: Exo အဖွဲ့ရဲ့ Sehun တစ်ယောက် Bigbang အဖွဲ့ဝင် Seungri ဆီကနေပြီး Food Truck လက်ဆောင်ရရှိခဲ့